भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्)
भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्) भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्)भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपाल भारत सीमा विवाद: मोदीको ‘योगी अस्त्र’
पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बिषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपाल भारत विवाद न्यूनीकरणका लागि भारतीय पक्षले ‘योगी अस्त्र’ प्रयोग गर्नुपर्ने बिषयमा भारतीय नीतिनिर्माताहरूले जोड दिएका छन् ।
भारतले सेनापति एम एम नरवाणेमार्फत् लिपुलेक हुँदै चीनसँग जोडिएको लिंकरोडप्रति नेपालको आपत्तीप्रति कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ संकेत गरिसकेका छन् । चीनसँग भारतको सिमामा सैन्य झडप र गतिविधि बढिरहँदा यी घटना विकास भएका हुन् । नरवाणेको अभिव्यक्तिपछि नेपालमा नयाँ नक्शा जारी भएपछि भारतीय पक्ष निकै गम्भीर देखिएको छ ।
अहिले जे जति घटनाहरु विकास भएका छन् त्यसमा भारतले नेपालको वर्तमान सत्ताबारे पनि चासो देखाइरेको छ । अहिले झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा छ । कम्युनिस्ट शक्तिलाई विगतमा भारतले नै सघाएको विषय भारतका राजनीतिक दलका नेता देखि विद्धानहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका छन् । यतिसम्मकी तत्कालिन नेकपा माओवादी सशस्त्र गतिविधिमा हुँदा भारतले नै भरनपोषण गरेको अभिव्यक्ति भारतीय सेनाका एकजना पूर्व जर्नेलबाट आएको छ ।
पूर्व जर्नेल गगन दीप बक्सीले माओवादीलाई पालेर हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पार्नु भारतको आत्मघाती गोल थियो भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले एबीपी न्युजसँग भारतले माओवादीलाई नेपालमा स्थापित गराउनुको सजाय भारतले भोगिरहेको सम्म भने । भाजपा प्रवक्ता प्रमोद शुक्लाले पनि कँग्रेस आईको सरकारको पालामा माओवादीलाई उचाल्ने क्रियाकलाप भएको बताए ।
यी अभिव्यक्तिहरु पछि भारत र नेपालमा एउटा शक्ति अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै चुनौती दिने तयारीमा छ कि भन्ने आशंकाहरु व्यक्त हुन थालेको छ । कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेर बलियो हुँदा चीन नेपालमा भारतको स्थान लिन सकेको टिप्पणी समेत नभएका होइनन् । जनरल अशोक मेहताले विगतमा भारतको नेपालमा भुमिका रहेकोमा चीनले उक्त स्थान लिइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अलग पक्षका थिंक ट्यांक देखि नेताहरुसम्मको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति भन्दा समग्र कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध देखिनथालेको छ । अब कम्युनिस्टप्रति कठोर बन्नुपर्ने सुझावहरु सम्म भारतीय थिंक ट्यांकहरुले सार्वजनिक रुपमै दिन थालेका छन् ।
टर्कीमा २ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु बिचल्ली, सडकमा आउने अवस्था! हार गुहार माग्दै सरकार उद्दार गर भन्दै नेपाली युवा मिडियामा
विष्णु खत्रिको नयाँ गीत “रिनै रिनको” सार्वजनिक